Dariskii Diigga Ka Dacwooday Ee Guul-darrada La Kulmay - Jigjigaonline
HomeWararka CaalamkaDariskii Diigga Ka Dacwooday Ee Guul-darrada La Kulmay
September 5, 2019 admin Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Maxkamad uu fadhigeedu yahay dalka Faransiiska ayaa soo saartay xukun ay ku taageereyso haweeneyda iska leh diiq ay dariskeeda kasoo dacwoodeen qeyladiisa.
Diiqan oo lagu magacaabo Maurice ayaa caro ku abuuray dariska, maadaama uu subax walba xilli aroor hore ah dhawaaqo, arrintaas ayaana sababtay inay maxkmaadda u gudbiyaan dacwad ka dhan ah.
Waxay diiqa ku eedeeyeen inuu qeyladiisa ku dhibaateeyo lamaane waayeel ah oo guri loo dalxiis tago ku leh meel u dhow guriga uu xayawaankaas joogo oo ku yaalla jasiiradda Oléron.
Warka ku saabsan kiiska ka dhanka ah diiqaas ayaa si deg deg ah ugu faafay caalamka, wuxuuna durbadiiba helay taageero aad u badan.
Haweeneyda iska leh diiqa, oo lagu magacaabo Corinne Fesseau ayaa aad ugu faraxday go’aanka maxkamadda ay ugu gacan seyrtay isku dayga lagu doonayay in lagu aamusiiyo xayawaankaas.
“Waa guul usoo hoyatay qof walba, waxaana loo faraxsan yahay sida aan aniguba u farxay. waxaan rajeynayaa in go’aankan ay ku qancaan”, ayey tiri iyadoo la hadleysay wakaaladda wararka ee AFP.
Qareenkeeda oo bishii Luulyo ka hadlayay maxkamadda ayaa ku dooday in dadka cabashada qaba ay aad u khaldan yihiin, maadaama qeylada diiqa ay qeyb ka tahay nolosha miyiga.
Ms Fesseau, oo jasiiradda Oléron ku nooleyd muddo 35 sano ah, ayaa haddii kiiskaas looga guuleysto ku khasbanaan lahayd inay xaafaddeeda ka guurto, ama ay sameyso qaab kale oo ay diiqeeda ku aamusiiso.
Hase yeeshee waxaa hadda la siin doonaa lacag dhan $1,000 doolar, taasoo ay magdhow ahaan ugu qaadaneyso kharashkii uga baxay howlaha maxkamadda, sida uu qareenkeeda sheegay maanta oo Khamiis ah, 5-ta bisha Sitember,2019-ka.
Dagaalka dhinaca sharciga ah ee ku saabsanaa Shimbirkan ayaa sababay in dhinaca Internet-ka laga abuuro ol’ole lagu taageerayo, kaasoo ay saxiixeen in ka badan 140,000 oo ruux.
Diiqan 4 jirka ah ayaa si weyn caan uga noqday dalka Faransiiska iyo meelo kale oo ka tirsan dunida.
Waxay taageerada loo hayo ka imaaneysay meelo aad uga fog waddanka Faransiiska, oo uu ka mid yahay dalka Mareykanka, sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters.
Kiiskan heerka sare ah ayaa toosh ku shiday ismaandhaafka ka dhex taagan dadka reer miyiga ah iyo kuwa reer magaalka ah ee doonaya inay kasoo fogaadaan, oo nasiino ka helaan nolosha shanqarta badan ee magaalooyinka.
“Arrintani waxay muujineysaa dulqaad la’aan heer sare gaaray – Waa inaad aqbasho dhaqanka miyiga, haddii aad dooneysid inaad ku noolaatid,” Sidaas waxaa wakaaladda wararka ee AFP ku yiri Christophe Sueur oo ah duqa xaafadda ay dagantahay haweeneyda Diiqa leh,.
Duqa magaalo kale, oo lagu magacaabo Bruno Dionis du Sejour, ayaa bishii May qoray warqad furan oo uu ku difaacayo shanqaraha miyiga – oo ay ka mid yihiin cida lo’da iyo dhawaaqa gambaleellada kaniisadaha – wuxuuna xarunta hiddaha iyo dhaqanka ee Faransiiska ka codsaday in shanqarahaas ay ku darto waxyaabaha la ilaaliyo, si ay uga badbaadaan cabashooyinka noocan oo kale ah.